Kulan maanta ay isugu yimaadeen dhinacyada saxaafada ee ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxay ku gorfeeyeen dhibaatada ay ku jirto saxaafada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howl gala magaalada muqdisho iyadoo ay halkasina ay shaqdoodii weriyanimo iskaga fariisteen qaar ka tirsan suxufiyiinta ka howlgala muqdisho islamrkaana shir saxaafadeed ay kasoo saareen waxuuna u qornaa sidan .
Kadib markii ay soo bateen tacdiyada tooska ah ee ka dhanka ah warbaahinta xorta ah sida dilalka ,afduubka,hanjabaadyada oo ay ugu dambeeyeen dilkii ALLE ha u naxristee agaasimihii idaacada shabeele muqtaar maxamed hiraabe iyo dhaawacii kasoo gaaray madaxa barnaamijyada idaacada shabeele axmed cumar xashi (axmed taajir) iyo afduubkii agaasimaha tv-ga universal xafiiska muqdisho ibraahin maxamed xuseen (jeekey) iyo hanjabaadyada isdaba jooga ah oo siyaabo kala gooni gooni ah kusoo gaaraya suxufiyiinta ka howlgala muqdisho.
Kadib markii garanweyney cid rasmi ahaan uga dambaysa tacadiyada aan soo sheegnay ee lagula kacao suxufiyiinta ,taasoo suurto gal ka dhigaysa in nalagu beegsado goobkasta ka mid ah dalka soomaaliya oo aan rumaysanahay inay joogaan kooxaha ka dambeeya falalka guracan islamarkaana dhinacyada isku haya siyaasada soomaaliya ay jawaabtoodu noqotay in dhinac dhinaca kale ku eedeeyo masuuliyada weerarada tooska ah ee lagu hayo suxufiyiinta soomaaliyeed .
Marka laga tago khatarta nafsadeena waxaa noo cadaatay inaan si madax banana oo dhex dhexaad ah aanu u shaqayn Karin taasoo meesha ka saarayso inaan soo bandhigno warbixino lagu kasoonaan karo oo ku aadan xaalada dhabta ah ee ka jirta gudaha soomaaliya ,sababaha aan soo sheegnay awgeed suxufiyiinta ku saxiixan war saxaafadeedkan waxay isla qaateen go,aakaan :-
A-anagoo og saamaynta uu go,aankaan ku yeelan doono dadka danyarta ah ,kuwa barkacay iyo doonaya in codadkooda wanaagsan ee nabada ka turjumaya ay gaarsiiyaan shacabka soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kalaba .
B-anagoo og inay fursad u tahay arintaan kuwa doonaya inay galaan dembiyada ka dhanka ah shareecada islaamka ,dhaqanka suuban ee soomaalida iyo bani aadamnimada islamrkaana kasoo horjeeda xaqiiqda rasmiga ah ee ka jirta soomaaliya waxaan go,aansanay .
Inaan cadeyno inaan sii wadi Karin shaqadeena weriyanimo taasoo khatar gelinaysa nafteena xiligan aan ku jirno ,tasoo aan ka cudur daaranayno inaan xili kale oo ay yimaadaan isbedel siyaasadeed oo amaankeenu sugan yahay aan kusoo noqon karno .
Weriyaasha maanta shaqadoodii iska casiley ayaa waxay kala yihiin kuwan :
1-Ibraahin maxamed xuseen (jeekey) agaasimaha tv-ga Unuiversal xafiiska Muqdisho .
2-c/raxmaan yuusuf sheikh (al-cadaala ) tifaf tiraha wararka idaacada iyo Tv-ga shabeele
3-c/casiis maxamuud guuleed (afrika ) tifaf tirihii Codka nabada qaybteda muqdisho .
4-maxamuud abuukar ma,-da tifatirihii wararka idaacada horn afrik
5-axmed cumar xaashi (axmed taajir) madaxa barnaamijyada idaacada shabeele
6-c/laahi kulmiye cadoow madaxii barnaamijyada idaacada horn afrik
7-c/fataax daahir jeyte barnaamij soo saare idaacada simba
8-xasan cali geeseey barnaamij soo saarihii idaacada Somali weyn
9-maxamed ibraahin raage webmaster websit-ka shabeele
10-maxamed maxam,ud odawaa webmaster horn afrik
11-maxamed c/laahi xaaji tifaf tiraha ku xigeenka idaacada shabeele
12-cabdille cabdi maxamuud (Oday cabdille) madaxa sheekada idaacada shabeele
13-cilmi cismaan faarax Boodhari madaxa wararka muqdisho ee tv-ga universal
14-bashiir diiriye naaleeye agaasime ku xigeenka xafiiska muqdisho
15-xuseen nuur geeseey weriye ka tirsan tv-ga ka Universal xafiiska muqdisho
Ugu dambayntii kulankan ay isku casilayeen weriyaashan ka howlagala magaalada muqdisho ayaa ka dambaysay ka dib markii suuqa bakaaraha si bareer ah loogu toogtay 7-dii bishan june ee aynu ku jirno agaasimhii idaacada iyo tv-ga shabeele oo ka howl gasha magaalada muqdisho iyo weliba dhaawac kasoo gaaray madaxii barnaamijyada ee isla idaacadaas axmed taajir taasoo wel wel iyo walaac ku reebtay weriyayaal badan oo ka howl gala caasimada muqisho oo qaarkood maanta is casileen halka qaarna ay ka Guuxayso inay shaqada joojiyaan
Hay�adda Calikaar ee Xuquuqda Aadanaha oo Cambaareysay Dilkii loogeytey Madaxii TVga iyo Raadya Shabelle Mukhtaar Maxammed Hiraabe.
Hay�adda Calikaar ee Xuquuqda Aadanaha waxay cambaareynaysaa dilkii arxan darada ahaa ee loo geystey Madaxii Idaacadda iyo Tvga Shabelle Mukhtaar Maxammed Hiraabe, iyo dhaawacii loo geystey Madaxa Barnaamijyada Idaacadda iyo Tvga Shabelle Axmed Taajir.
Hay�adda Calikaar ee Xuquuqul-inshaanka, waxay dilalkaas ku tilmaantay kuwo araxan-darro ah oo lagu cirib-tirayo dadka u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wararka iyo macluumaadka ka siiya xaaladda iyo wixii kusoo kordha Waddanka Soomaaliyeed.
Dadka dilalka qorsheysan geysanaya ayaa waxay yihiin dad ka faa�iideysanaya fawdada ka jirta golaka, si tsaas looga hor-tago waxay Hay�addu ku baaqaysaa in gebi ahaanba la soo af-jaro colaadda ka aloosan gudaha koofurta Soomaaliya, iyadoo dadka ku nool deegaanadaas ay horey ula diifeysnaayeen dagaallada sokeeye ee aan dhammaadka lahayn. Waxay hay�addu ka codsanaysaa qolooyinka dirirtu ay ka dhaxayso in ay joojiyaan colaadahaas ay ku barakacayaan Ummadda Soomaaliyeed kuwooda taagta daran.
Hay�addu waxay ugu baaqeysaa dhinacyada ku hardamaya hanashada awoodda koofurta Soomaaliyeed in ay gebi ahaanba khilaafkooda siyaasadeed ku dhammeeyaan is-afgarad iyo is-faham, si markaas looga gudbo mashaakillada siyaaseed ee dagaallada dabada la gala, ee markaas barakiciya Taag-daranta Soomaaliyeed.
Ugu dambayntii waxay hay�addu u direysaa ehaladii iyo qaraaba Mukhtaar Maxammed Hiraabe in Eebbe samir iyo iimaan ka siiyo iyo isagana Alle uu naxariisto oo, janaddii Firdoowsa ka waraabiyo.
Xog-hayaha War-faafinta Ee hay�adda Calikaar ee Xuquuqda Aadaha.